Nitsidika An’i Maria i Gabriela | Tantara ao Amin’ny Baiboly
HAMAKY AMIN'NY TENY Acholi Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Basque Bassa (Cameroun) Batak (Karo) Bichlamar Bicol Boligara Boulou Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuabo Cinghalais Dangme Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fitenim-paritra Alemà Fon Frantsay Ga Galicienne Garifuna Goun Grika Guarani Géorgien Haoussa Herero Hiligaynon Hindi Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Iban Ibinda Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Irlandey Isoko Italianina Kabiyè Kabuverdianu Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kekchi Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Kwangali Kwanyama Letonianina Lhukonzo Lingala Litoanianina Lomwe Luganda Luo Macua Malagasy Malayalam Malezianina Mam Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mazateky (Huautla) Mixe Mooré Myama Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Puebla Avaratra) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Nias Norvezianina Nyungwe Nzema Okpé Ossète Otetela Pangasinan Pendjabi Pidgin (Cameroun) Pidgin Nizerianina Poloney Ponape Portogey Portogey (Portogaly) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quiché Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sena Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Afrika Atsimo) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Soundanais Sranan Tongo Swahili Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tamoul Tandroy Tarasque Tatar Tenin’ny Tanana Alemà Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Italianina Tiorka Tiv Tojolabal Totonac Tseky Tshwa Tsonga Twi Tzotzil Télougou Urhobo Uruund Valencienne Venda Vezo Vietnamianina Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yorobà Zapoteky (Lachiguiri) Zoloa tzeltal Édo Éwé
Nipetraka tao Nazareta, tany Galilia, i Maria, havan’i Elizabeta. Mbola tanora i Maria, ary efa ho lasa vadin’i Josefa mpandrafitra izy. Niseho taminy ny anjely Gabriela, rehefa bevohoka enim-bolana i Elizabeta. Hoy i Gabriela: ‘Manahoana ry Maria! Tena tian’i Jehovah ianao.’ Tsy azon’i Maria ny tiany holazaina. Dia hoy i Gabriela: ‘Ho bevohoka ianao dia hiteraka lahikely, ary ataovy hoe Jesosy ny anarany. Ho Mpanjaka izy, ary haharitra mandrakizay ny Fanjakany.’
Dia hoy i Maria: ‘Izaho ange mbola virjiny e! Dia ahoana no ahafahako miteraka?’ Hoy i Gabriela: ‘Tsisy zavatra tsy hain’i Jehovah izany. Fa homeny fanahy masina ianao dia hanan-janaka. Efa bevohoka koa i Elizabeta havanao.’ Dia hoy i Maria: ‘Mpanompovavin’i Jehovah aho. Ho tanteraka amiko anie izay noteneninao!’
Nankany amin’ny tanànan-dry Elizabeta àry i Maria. Rehefa niarahaba an’i Elizabeta i Maria, dia henon’i Elizabeta nihetsiketsika be ilay zaza tao an-kibony. Feno fanahy masina izy ka niteny hoe: ‘Tian’i Jehovah ianao, ry Maria. Faly aho fa ny renin’ny Tompoko mihitsy no tonga ato an-tranoko!’ Dia hoy i Maria: ‘Midera an’i Jehovah amin’ny foko rehetra aho.’ Nijanona telo volana tao amin-dry Elizabeta i Maria, vao nody tany Nazareta.
Rehefa fantatr’i Josefa hoe bevohoka i Maria, dia saika hisaraka taminy izy. Nisy anjely anefa niteny tamin’i Josefa tao amin’ny nofy hoe: ‘Aza matahotra hanambady an’i Maria, fa tsy nanao zavatra ratsy izy.’ Dia nalain’i Josefa ho vadiny i Maria ka nentiny tany an-tranony.
“Izay rehetra mahafinaritra an’i Jehovah, dia ataony na any an-danitra, na etỳ an-tany.”—Salamo 135:6
Fanontaniana: Inona no notenenin’i Gabriela tamin’i Maria? Inona avy no nitranga tamin’i Elizabeta sy Maria? Nahafaly an-dry zareo ve izany?
Bevohoka i Maria Nefa Tsy Nanambady
Nino an’​i Maria ve i Josefa rehefa nilazany fa bevohoka noho ny fanahy masina izy, fa tsy nisy lehilahy niaraka taminy?